Nepal Chitra - Video blogging portal of Nepal
भित्रियो इजरायली प्रविधि :
काठमाडौंको आडैमा लुकेको दुःख :
भट्टेडाँडा । काठमाडौं सहर, धेरैको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न र गराउन सफल कोलाज सहितको उपत्यका । यहि उपत्यकालाई आफ्नो वरिपरी बेरेर बसेको पहाडहरु मध्येको एउटा पहाडी बस्ती । उपत्यकादेखि मोटरमा जम्मा १ घण्टा । शिरको टोपी नै खस्ने अग्ला भिर, खुट्टाका पैताला गलाईदिने चट्टानी मार्ग र निदारका पसिना चुहाईदिने उकालो । ललितपुरको बागमती गाउपालिका...
बुटवल । माटोमा गरिँदै आएको खेती प्रणाली छोडेर रुपन्देहीमा आधुनिक पद्धतिमा तरकारी खेती शुरु भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका–३ विष्णुपुरामा खोलिएको लुम्बिनी हाइड्रोपोनिकले माटोविनै तरकारी खेती थालेको हो । झण्डै दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा...
‘मोदी छिमेक कूटनीति सुधार्न चाहन्छन्’
रंगशाला निर्माणमा किन यस्तो व्यवधान ?
भट्टेडाँडा । काठमाडौं सहर, धेरैको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न र गराउन सफल कोलाज सहितको उपत्यका । यहि उपत्यकालाई आफ्नो वरिपरी बेरेर बसेको पहाडहरु मध्येको एउटा पहाडी बस्ती । उपत्यकादेखि मोटरमा जम्मा १ घण्टा ।...
टाेली घाेषणा :
के युनाइटेडले बार्सिलोनालाई रोक्ला ! कसको सम्भावना कति ??
एसियन हिरो सनले बनाए सानदार यूरोपियन किर्तिमान
एम्बाप्पे : मेस्सी र रोनाल्डो बीचको राम्रो छनौट गर्नु भन्दा म सन्यास लिनु बेस ठान्छु !!
टाइटलबाट अब दुई जित टाढा
एचआईभीले रित्तिएको जिन्दगी ! भरिने आश छ, भर्दिने कसले ?
तरकारी बेचेरै बनाए काठमाडौंमा साढे तीन तले घर, भन्छन्– दुःख गरेअनुसार सुख भाेग्दैछु
काठमाडाैंमा जापानी ट्राफिकको सेवा, यसरी सिकाउँदैछिन् ट्राफिक नियम
पुराना कपडा फ्याँक्नु भन्दा यसरी ब्याग बनाउने कि ? (भिडिओ)
गरीबको घरमा जस्ताको छानो
नेपालका प्रितम तेस्राे र आयुष चाैंथाे
सत्यराज र मेलिनाको स्वरमा ‘मेरो प्यार लैजाउ’
चलचित्र कलाकार संघकाे अध्यक्षमा खड्का निर्वाचित
इमेल : nepalchitra.ne[email protected]